Xurguf ka dhex aloosan xisbiga Doogga MP - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xurguf ka dhex aloosan xisbiga Doogga MP
La daabacay tisdag 1 december 2015 kl 16.00
Mukhtaar: Danta guud waa in marar la eego
Xubno badan oo ka tirsan xisbiga Miljöpartiet ayaa dooneya in la burburiyo heshiiskii uu xisbiga MP la galay xisbiga ey dawladda ku midoobeen Socialdemokraterna ee la xiriiray siyaasadda soo-galootiga. Heshiiskaasina oo lagu dhawaaqay 24-kii bishii noveembar. Magaalooyinka Malmö iyo Stockholm ayaa fiid-nimadii shalay ey ka qabsoomeen kulammo aan caadi ahayn iyo sidii looga xaajoon lahaa muranka xisbiga ka aloosmay.
Mats Pertoft, waa gudoomiyaha xisbiga MP ee magaalada gobolka Stockholm:
- Kulankan waxaannu isugu yeernay waa marka koowaade in dhammaan xubnaha xisbiga ee gobolka lagu war-geliyo xaqiiqda go’aanka dawladda ee la xiriira siyaasadda socdaalka iyo xubnuhu si furan uga doodaan go’aanka, isagoona intaa raaciyay inuu lama filan waa ku noqday heshiiska ey wada-jirka u gaareen xisbiyada xulufada ku ah dawladda:
Mukhtaar wuxuu ka mid yahay xubnaha xisbiga Doogga (MP) ee magaalada Eskilstuna. Isagoona sheegay in tallaabada heshiiskan lagu gaaray ahayd mid laga laga fur-san waayay, maadaama uu culeeys ballaaran soo fuulay dalka qaxootiga aawadii:
Isha/ Ekot, Radio Sweden